အဆိုပါမိုက်ခရိုတရားစွဲအထည်, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်ဒဏ်ငွေ trichoma ရှိပါတယ်, အတရားစွဲသုတ်ပဝါသင်နှင့်အတူ sth သုတ်အခါသုတ်ပဝါပေါ် fluffy ပါးလွှာနှင့် graceful.Very ပျော့ Towel.The သေးငယ်တဲ့ trichoma အပေါငျးတို့သရေနှင့်ဒဏ်ငွေဖုန်ကိုင်နိုင်ပါတယ်ခံစားရစေသည်။ ရေသဲလွန်စသို့မဟုတ်မြေမှုန့်သဲလွန်စ leave.Lint အခမဲ့မရှိပါ။ အလွန်ကောင်းသောတူရိယာ cleaning.also များအတွက်အားကစားသုတ်ပဝါပစ္စည်းသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား: 30 * 30CM, * 40CM 40, 40 * 60CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 180gsm-220gsm အသုံးပြုမှု: ကောင်းသောတူရိယာပျော်စေ, ဖန်ထည်, မှန်ဘီလူး (DV သို့မဟုတ်ကင်မရာမှန်ဘီလူး), screen.also, Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ: က မှစ. အားကစားသုတ်ပဝါသို့မဟုတ်စောင်ပစ္စည်းဘေရက်စ်နိုင်ပါ။
မိုက်ခရိုသန့်ရှင်းရေး MITT ရောင်းချ
အဆိုပါ MITT performance.The MITT ထုတ်ကုန်အပေါ်ရေနှင့်မြေမှုန့်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်သန့်ရှင်းရေး, မိုက်ခရိုပစ္စည်းကနေအကောင်းကိုဖန်ဆင်းသည်ကိုအခမဲ့ surface.Lint မရှိသဲလွန်စထားခဲ့တယ်။ ကားတစ်စီးသန့်ရှင်းရေး, polishing နှင့် waxing.This MITT များအတွက်ထိရောက်သောလူသားဝါဒအသှငျအပွငျ, ကပိုမိုလွယ်ကူသင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးစေသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား: 17 * 23CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 350gsm-550gsm အသုံးပြုမှု: ကားတစ်စီးသန့်ရှင်းရေး, polising နှင့် waxing.house သန့်ရှင်းရေး, ဖန်ထည်သန့်ရှင်းရေးမှ: ။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို
မိုက်ခရိုအဝတ်လျှော် Applications ရောင်းချ
မိုက်ခရိုအပြင်ဘက်တွင်ထည်များနှင့်အတွင်းပိုင်းရေမြှုပ်နှင့်အတူအားမိုက်ခရိုမြှုပ် Applications ။ အခမဲ့သင်သန့်ရှင်းရေးပါဘူးသောအခါ, Applications လျင်မြန်စွာထုတ်ကုန်ခန်းခြောက်နိုင်ပြီး completely.Different ဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားသောသန့်ရှင်းရေး purpose.The အားမိုက်ခရို Applications အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျကို ပို. ရေကိုစုပ်ယူအလွယ်တကူရေ, မြေမှုန့်, Diri နှင့်အမဲဆီရွှေ့နိုင်ပြီး quickly.Lint မရှိသဲလွန်စထားခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းခံရဖို့အလွယ်တကူပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖော်ရွေ, ကောင်းစွာဝတ်ဆင်။ ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့် 22 * 11 * 7CM /: ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား 250gsm-400gsm အသုံးပြုမှု: ကားတစ်စီးအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ကားကိုအဝတ်လျှော်သည်, နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းအဘို့, အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးဘို့, မှစ. မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေး: Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းထုတ်ကုန်များ CO ။ , Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို
မိုက်ခရိုပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းအဆိုပါအားကစားသုတ်ပဝါ, ပျော့နှင့် legerity, ကောင်းသောစုပ်ယူလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အသားအရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအခမဲ့ washing.lint ပြီးနောက် washing.The သုတ်ပဝါခက်ခဲဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပြီးနောက်အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့ cleanlily အသားအရေနှင့်အဆင်ပြေ feelings.Dry completely.give နိုင်ပြီး, အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုအပြီးမပါအနံ့။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား: 30 * 80CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 250gsm-400gsm အသုံးပြုမှု: မှစ. အားကစားလက်သုတ်ပုဝါ, မျက်နှာသုတ်ပဝါ, လက်သုတ်ပုဝါ, ချွေးသုတ်ပုဝါအပေါငျးတို့သမျိုးစုံတို့အတွက်: Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ။ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို
ဤသည်အားမိုက်ခရိုစိန်အဝတ်အစား, အလွန်ပျော့ပျောင်းသောလက်ခံစားချက်, ကောင်းသော absorption.With ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန် shinning, ထိုအရပ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူ surface.The ထည်အပေါ်တည်ငြိမ်သေးငယ်တဲ့ dismond ဖြစ်ကြပြီးက performance.For မှန်ဘီလူးသန့်ရှင်းရေး slick.Good ခံစားရ, Screen, ကြေးမုံနှင့် အခမဲ့, ရေမရှိသောသဲလွန်စသို့မဟုတ်မြေမှုန့်ကိုလက်ဝဲသန့်ရှင်းရေးနှင့် polishing.Lint glases ။ ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့် * 30CM 30, * 40CM 40, 40 * 60CM /: ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား 240gsm-320gsm အသုံးပြုမှု: မှန်ဘီလူး, တီဗီနဲ့ကွန်ပျူတာစခရင်, ပြတင်းပေါက်များ, ကြေးမုံနှင့် Glassware အဘို့, dishwares သန့်ရှင်းရေးနှင့် ချော။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို: ကနေ။
မိုက်ခရိုဆံပင်-ခြောက်သွေ့တဲ့ဗေါင်း / မိုက်ခရိုဆံပင်သုတ်ပဝါ DESVRIPTION: အဆိုပါပေါင်းနှင့်လက်သုတ်ပုဝါကောင်းသောစုပ်ယူမှုနှင့်အတူအားမိုက်ခရိုပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလက် feeling.The ဒီဇိုင်းဆံပင် washing.Microfiber ထည်သင့်ရဲ့ဆံပင်မှလုံခြုံပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ဆံပင်အခြောက်မှပဲအဘို့ဖြစ်ပါသည် ။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုအရွယ်အစား: 25 * 65cm / 30 * 80cm / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 250gsm-400gsm အသုံးပြုမှု: မှစ. ဆံပင်ခြောက်သွေ့: ။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို
ဒါဟာဝါးဖိုင်ဘာကနေဖန်ဆင်းတော် terry.very ပျော့လက်ခံစားချက်များကို, ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းရေးရလဒ်အတိုင်, Anti-ဘက်တီးရီးယားသုတ်ပဝါဒါပေါ်မှာမျက်နှာသုတ်ပုဝါ, ရေချိုးသုတ်ပဝါ, မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အဘို့သုံးနိုင်တယ် function.this ကားရှိပါသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု: ဝါးဖိုင်ဘာပုံမှန်အရွယ်အစား: 40 * 40CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 350gsm-600gsm အသုံးပြုမှု: မျက်နှာသုတ်ပဝါ, ရေချိုးထား, အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေး, မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေး, မှစ. သန့်ရှင်းရေးဟင်းလျာများ: ။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ငါ့အားဖြင့်: လက်သုတ်ပုဝါ
မိုက်ခရို Chenille MITT ရောင်းချ
အဆိုပါမိုက်ခရို Chenille MITT အားမိုက်ခရိုထဲကနေကိုဖန်ဆင်းသည် 2-4cm Chenille ဖုန်မှုန့်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသွင်အပြင်နှင့် smoothnesss လက် feeling.The MITT absorption.With ပိုပြီးရေကိုစုပ်ယူနိုင်ပါသည်, ဒီအထူးဖွဲ့စည်းပုံမှာတဦးတည်း MITT ပိုမိုအားမိုက်ခရိုအပေါ်ပိုပြီးအားမိုက်ခရိုစောင့်ရှောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိပါတယ် သငျသညျကားကိုအဝတ်လျှော်ဘို့ it.Best ရွေးချယ်မှုသုံးပါနှင့် drying.The ထည်, ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်အထည်များအတွက်လည်းဆိုဖာနှင့်ကြမ်းပြင်ဖျာပေါ်တွင်ခေါငျးအုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်, ဖုန်နှင့်အမဲဆီလျင်မြန်စွာနှင့် completely.Lint အခမဲ့မရှိသဲလွန်စထားခဲ့တယ်။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား: 18 * 26CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 1500gsm-2500gsm အသုံးပြုမှု: ကားတစ်စီးသန့်ရှင်းရေး, မော်တော်ကားအဝတ်လျှော်လည်း mops အထည်များအတွက်ကားတစ်စီးချောနှင့် waxing.The ထည်အဘို့, ခေါငျးအုံးနဲ့ကြမ်းပြင်ဖျာမှ: Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO ။ , Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို
ကျန်ကြွင်းရစ်သောအားမိုက်ခရိုဖန်အထည်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ construction.It slick ခံစားရအတည်ပြုခဲ့သည်အလွန်ကောင်းသော absorption.It ပြတင်းပေါက်များ, mirros နှင့်အခြားဖန်ထုတ်ကုန်များအတွက်အထူးဖြစ်ပါတယ်သန့်ရှင်းရေးနှင့် polishing.no ရေသဲလွန်စမျှဖုန်မှုန့်သဲလွန်စက left.Use ခြောက်သွေ့သောသို့မဟုတ် damp, နှစ်ဦးစလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန် Size: 240gsm-400gsm အသုံးပြုမှု: ဒီတော့အပေါ်ပြတင်းပေါက်များ, မျက်မှန်, Glassware, ကြေးမုံနှင့်သန့်ရှင်းရေးတို့အတွက် * 30CM 30, * 40CM 40, 40 * 60CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို: ကနေ။
ဤသည်အားမိုက်ခရို Long ကလိပ်ခေါင်းသုတ်ပဝါ 5-7MM.the ရှည်ပုံထဲမှာသုတ်ပဝါပေါ်ပုံထားသောပုဝါကိုပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်ပိုပြီး absorption.Also စေသည်, အရှည်လျားပုံထားသောပုဝါပိုကောင်းရှာဖွေနေနှင့်ကြာကြာအလုပ်လုပ်စေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး products.We ၏တဦးတည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဘဝ။ လျင်မြန်စွာရေ, မြေမှုန့်, အမဲဆီနှင့်အမှိုက်ကိုဖယ်ရှားနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် completely.lint ဖို့ damp သို့မဟုတ်အခြောက်အကကိုသုံးပါ, ရေမရှိသောသဲလွန်စသို့မဟုတ်မြေမှုန့်သဲလွန်စထားခဲ့တယ်။ ဖွဲ့စည်းမှု: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား: * 30CM 30, * 40CM 40, 40 * 60CM / ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့်: 300gsm-700gsm အသုံးပြုမှု: နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးဘို့, အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေး, မော်တော်ကားအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ကားကိုသန့်ရှင်းရေး cleaning.for ကြမ်းပြင်သည်။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို: ကနေ။